Rita, Writing for My Sake!: မောင်သစ်ဆင်း ရဲ့ ကျိန်စာ
Posted by Rita at 9/14/2009 11:49:00 PM
ဖေဖေသားတို့လို ငယ်ခဲ့ဖူးသလား ဆိုတဲ့ စာသား ကို အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ်။ လူကြီးမိဘတွေနဲ့ အခြေအတင် ပြောရရင် အဲလို ပြောကြည့်ချင်ခဲ့ဘူးတယ်၊ အမလဲ ၀တ္ထုတိုတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းကျော် ရေးတဲ့ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့မျိုးကိုတော့ ငယ်တုန်းက အတုခိုးရေးဖူးတယ်။ တကယ်ကျ အဲလောက်ဖွဲ့နွဲ့ပြီး အသေးစိတ်ကိုတော့ ရေးရတာ စိတ်မရှည်ချင်ပြန်ဘူး။
နောက်တော့လဲ ဖတ်တဲ့လူတယောက်ဘ၀မှာပဲ ပျော်မွေ့နေတော့တယ်။
ရီတာ့ကိုအထင်ကြီးမိတာ ဒီလို စာတွေဖတ်ခဲ့တာရယ် ဒီလို ပြန်ပြီးရေးနိုင်တာတွေလဲ ပါတယ်။
hi reading your post, love it.
ငယ်တုန်းပြောတယ် မထင်ပါနဲ့ (:
ရီတာရေ..ဒီတခါတော့..သေချာ ဆင်းပြီး နှုတ်ဆက်သွားတယ်။ ရီတာက..စာတွေ အများကြီး ဖတ်ခဲ့တာပဲ။ အခန်းဆက်လည်း ထပ်ဆက်ပါအုံး။း)
ရီတာရေ.. မဟေသီဆိုလို ဟိုတုန်းက မဟေသီ မဂ္ဂဇင်းတွေ ပြန်ဖတ်ချင်လာ သလိုလိုပဲ ခုလို မိုးအုံအုံမှာ စာအုပ်လေးနဲ့ နှပ်နေရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ခုတော့ ကျုပ်မှာ ဆိုဒ်ထဲမှာဗျ...
မောင်သစ်ဆင်းရဲ့ စာတွေ ဖတ်ခဲ့ဘူးမယ်ထင်ပါတယ် သေသေချာချာတော့ မမှတ်မိဘူးဗျ
အမ ဖေးဖရိတ် စာရေးဆရာတွေထဲက တယောက်ပေါ့။ ထူးဖေသစ်က ဆရာရဲ့ သင့်ဘ၀ ကာဗာစတိုရီတွေကို ရေးတဲ့ ကလောင်ခွဲ နံမည် တခုပါ။ ညီမ ထင်တာ မှန်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာ့သားလေးရဲ့ နံမည်လဲ ဖြစ်တယ်။
ဆရာဦးတင်မောင်သန်း၊ ဆရာမောင်သစ်ဆင်းတို့နဲ့ အတူတူ လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက ဘ၀မှာ ပညာလဲ တိုး၊ ပြန်တွေးရင် ကျေလဲ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ ကျိန်စာကို အမတို့အားလုံး ကြိုက်ကြတယ်။ ခုခေတ် ပညာတတ်အများစုကို ကိုယ်စားပြုနေသလို ထင်မိတယ်။
Thanks for information of မောင်သစ်ဆင်း ကျိန်စာ articles.
Ifatime permitted, I'll read it.
သုတေသနသမားတွေ အခု မဆင်းရဲတော့ပါဘူး။ အင်တာ ပရက်နာတွေ ဖြစ်လို့။
Thanks for comprehensive review, Do you have "A story of two molars" by Saya Mg Thit Sin that mentioned the interview of Myanmar primate _hunters in "Your Life" magazine.
Or, Please indicate available site on web.
ခုပြောတဲ့ article မရှိပါဘူးရှင်။